Ezona zicelo zibalaseleyo zokufunda ukudlala ikatala | IPhone iindaba
Eyonaapps ilungileyo yokufunda ukudlala ikatala
Ufuna funda ukudlala ikatala kwaye awazi ukuba uqale ngaphi? Ngaba unayo i-iPhone okanye i-iPad? Ewe, sele uneenkomo ezininzi. Andisoze nditsho ukuba ndilungile ngokudlala isiginkci okanye ibhasi, kodwa xa ndiqala utitshala wam wandenza kunye nomhlobo wam sathenga incwadi ngemithambo yabaqalayo ukulandela umgca. Ndicinga ukuba yayingu-1996 kwaye ngelo xesha sasingenakho ukufikelela kulwazi oluninzi kwiminyaka engama-20 kamva.
Kwimeko yam, bendisiya kwiiklasi iinyanga ezi-6 kuphela, kodwa ngenxa yokuba ndidiniwe ukuzama ukudlala ikatala (uyamangaliswa?). Nje ukuba ndifunde eyona nto ibaluleke kakhulu, ndiyakhumbula ndithenga ngeencwadi ezimbalwa iithebhu, amanqaku athile akhethekileyo egitare, ngomculo osele ndiwuthandile. Enkosi kwiithebhu, phantse nabani na angadlala ikatala, ubuncinci iingoma ezilula. Olu luhlu luza kubakho phantse kuso nasiphi na isicelo esijolise ukusifundisa indlela yokudlala ikatala kwaye kwesi sithuba siza kuthetha ngezi zicelo.
1 Funda ukudlala ikatala ngezi zicelo ze-iPhone okanye i-iPad
1.1 Guitar pro
1.2 Iingoma eziQalayo zeGuitar
1.3 Iithebhu zeSongsterr kunye neChords
1.4 Lick yoSuku
1.5 Guitar Master
Funda ukudlala ikatala ngezi zicelo ze-iPhone okanye i-iPad
Phambi kokuba siqale ndingathanda ukuyenza icace into yokuba akukho nto injengomntu oxelela indlela yokwenza ezinye izinto. Umzekelo kwaye njengakuyo yonke into, ekuqaleni mna nomhlobo wam kwakufuneka senze iminwe apho sasidlala khona ngoo-0, 1, 2, 3 no-4 songeza umnwe ngalo lonke ixesha ngaphandle kokuphakamisa iminwe yangaphambili. Andiqondi ukuba iinkcazo ezisisiseko zikhona naphi na App Ivenkile yosetyenziso, kodwa siza kufumana ezinye ezininzi ezinokusinceda sifunde ukudlala ikatala njengale ilandelayo.
Ndiyiqamba igama eyokuqala, nangona isenokungabi yeyona ilungileyo kubasebenzisi be-novice. Njengakwinguqulelo yayo yeekhompyuter, iGuitar Pro ye-iOS iyakusivumela dlala iifayile .gpx ngexesha lokwenyani. Isixhobo ngasinye siya kuba sendleleni yaso, ke ngoko sinokukhetha ukuba sifuna ukubona i-tablature yegita ekhokelayo, isingqisho okanye i-bass, igubu okanye nasiphi na isixhobo. Iifayile .gpx inokufumaneka kumakhulu eewebhusayithi, kodwa ezimbi, okanye ezilungileyo, kuxhomekeke kwindlela ozijonga ngayo, kukuba ezi fayile zenziwe luluntu, ukuze sikwazi ukufumana ifayile elungileyo kunenye.
Iingoma eziQalayo zeGuitar
Ukuba usazi kakuhle isiNgesi, esi sicelo sinomdla kuwe. Iingoma zokuqala zeGuitar zifana nokuba nazo umntu osixelela indlela yokwenza izinto Ukucebisa ngezifundo kunye neengoma zokudlala. Uyenza njani? Ewe kwividiyo, ukuze sikwazi ukubona ukuba wenza njani utitshala wethu. Ndiye ndakhangela kuYouTube ngendlela yokudlala ezinye iingoma, ezingqina kwakhona ukuba umfanekiso ungcono kunamagama aliwaka. Kwiingoma zokuQala zeGuitar kukho iividiyo ezininzi eziza kusivumela ukuba sifunde ukudlala ikatala ngokutolika iingoma ezilula.
Iithebhu zeSongsterr kunye neChords
Ukuba imali ayisiyongxaki, ukhetho olulungileyo nolugqibeleleyo ziiTabsstr Tabs & Chords. Ndiyikhankanya imali kuba ukonwabela i-100% yesi sicelo kuyakufuneka sibhalise kwinkonzo ebiza i- $ 5 ngenyanga. Into esiza kuyifumana ukuba sicinga ukuba iindleko ziya kuba luhlobo lweGuitar Pro yabantu abangayithandiyo okanye abangaziyo ukuba bangazifumana phi iifayile ze .gpx. I-Songsterr Tabs & Chords ziya kusivumela dlala iitheyibhile Gqibezela kakhulu ikatala kunye nezinye izixhobo, kodwa kubandakanya injini yokukhangela apho siza kufumana iingoma ezintsha, kwaye zintsha, esele zikhona, umzekelo, iMoth Info Flame, ingoma yeMetallic Ingoma okwangoku ifumaneka kuphela njengokukhutshwa kwangaphambili kwe- "Hardwired… To Selfdestruct", icwecwe iza kufika ngo-Epreli 18. NgeyeNkanga.
KwisiNgesi, iLick of de Day lukhetho olukhulu esinokulufunda sinombulelo kwizifundo ezingaphezulu kwe-1.200 kwi-blues, rock, jazz, ilizwe, i-bluegrass, i-fingerstyle, i-rockabilly, i-R & B kunye ne-acoustics. Isifundo ngasinye sineevidiyo ezili-12 ukuya kwezingama-25 ukuze kungabikho nkcukacha ibalekayo kuthi kwaye, ukuziqhelanisa okuninzi, akukho buchule busichasayo. Kungenzeka njani ukuba kungenjalo, okuninzi koku siza kukuphumeza enkosi kwiithebhu ngexesha lokwenyani. Ewe kunjalo, qaphela ukuba uninzi lomxholo uhlawulwe.
Kwaye ndigqibezela olu luhlu lincinci ngeGuitar Master, isicelo simahla esenze ukuba ndibambelele kuso kwaye ndicime ezangaphambili endinazo zesitayile esifanayo (kwaye nganye yezangaphambili ibisusile yangaphambili). Guitar Master usinika Sombulula ikatala kunye neebhasi, metronome, Iilophu ezingamagubu ezili-157, izikali ezili-108 kunye nokumbalwa chords ezifumanekayo kwizinto ezishiyekileyo. Njengokuba oko kwakungonelanga, esi sicelo sisivumela ukuba sitshintshe ukulungiswa ukuze sikwazi ukudlala kwi-D ephantsi okanye enye yeentlobo ezingama-79 zokulungisa ezifumanekayo, eziqinisekileyo ukuba zize zilungele abo bathanda kakhulu namhlanje Isinyithi esithi ngalo lonke ixesha izandi zinobuzaza.
Mhlawumbi ndibekelwe imeko encinci endiyaziyo ngekatala, kodwa ezi zizindululo zam. Ngaba uyazi nasiphi na isicelo sokufunda ukudlala ikatala endinokuyifaka kolu luhlu?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iapps zokusebenza » Eyonaapps ilungileyo yokufunda ukudlala ikatala
Enkosi kakhulu ngegalelo Pablo.
Kulungile ukuba ndiyidlulise kumfazi wam, ndamnika epi les paul (ipro plopop pro) kwaye kukho into elihlwempuzekileyo elwayo ...
Ndiyakukhumbula isiginci esisiseko sedummies, okanye zonke iindlela, zisimahla.
I-Gmail ye-iOS ihlaziywa ngokwenza ngokutsha ujongano lwayo kunye nokongeza imisebenzi emitsha
I-iPhone 7 emhlophe eqaqambileyo, umbala omtsha onokuthi uze kwi-smartphone ye-Apple